I-china Powder Metallurgy Structural Parts abenzi kunye nabathengisi | Xuanyi
Powder yokunyibilikisa isinyithi
Powder yokunyibilikisa intsimbi
Izixhobo zokucheba ingca
Amalungu ePowder Metallurgy Auto
Powder yokunyibilikisa isinyithi Stainless
Izixhobo Isixhobo samandla
Isixhobo sePompo yeoyile
Umatshini weeLaphu Ukuthunga Umatshini Womatshini Wokuhombisa iimpahla
Oku kubhekisa kwicandelo elikhethekileyo lomgubo wokunyibilikisa isinyithi, njengoko uxinizelelo, i-porosity, izixhobo kunye neendlela zokunyanga ubushushu zegiya yokunyibilikisa isinyithi zichaphazela ngokuthe ngqo ubunzima kunye namandla. Izinto eziphathekayo, ubunzima obukhulu.Iindlela zonyango zokushisa ngokubanzi zibandakanya ukucima i-carburizing, ukucima i-carbonitriding, ukucima i-frequency frequency, ukucima i-frequency frequency, ukucima i-oyile, njl njl Inkqubo yokucima kunye ne-qualification yokucima igcina ubunzima bonyango olushushu.
Ukulawulwa kolawulo lweemveliso zesinyithi ngokubanzi ngexesha lonyango lobushushu
Ukuxinana komgubo oqhelekileyo we-atomised (kubandakanya i-carbon steel kunye ne-copper-carbon alloy steel) ingaphezulu kwe-6.9, kwaye ukuqina kobunzima kungalawulwa malunga ne-HRC30.
Ngokubanzi, uxinizelelo lomgubo osele usebenze ngaphambili (i-AB powder) idlula i-6.95, kwaye ubunzima bokucima bunokulawulwa nge-HRC35.
Iipowder eziphezulu esele zisebenziwe zinoxinano olungaphezulu kwe-6.95 kunye nokucima ubunzima obulawulwa kwi-HRC40.
Iimveliso Powder yokunyibilikisa isinyithi ezenziwe ngezi zinto zingasentla zinoxinano oluzinzileyo kunye nezinto, kwaye ubunzima emva konyango lobushushu luhlangabezana neemfuno ezihambelanayo, ke amandla abo eqine kunye namandla okucinezela aya kufikelela kwincopho engcono.
Ngaba ubunzima bonyango lobushushu bomgubo wokunyibilikisa isinyithi unokufikelela kwiintsimbi ezingama-45?
Nangona kunjalo, ngenxa yokuba uxinano lweemveliso ze-PM aluphakama njengaleyo yentsimbi engu-45, uxinano oluphezulu lwendawo zokucinezela ze-PM zihlala zi-7.2 g / cm, ngelixa uxinano lwentsimbi engu-45 ngu-7.9 g / cm. Umgubo wokunyibilikisa isinyithi okanye unyango lobushushu obugqithisileyo olungaphezulu kwe-HRC45 luyakwenza ukuba imveliso ye-metallurgy brittle ngenxa yokucima okuphezulu, okukhokelela kukomelela kweemveliso zesinyithi somgubo.
Okulandelayo, siya kuthelekisa i-P / M yokwenza igiya kunye nezixhobo ezenzelwe ukuloba.
1.Umgangatho wokusetyenziswa kwezinto eziphezulu, ukuya kuthi ga ngaphezulu kwe-95%
2. Akukho okanye ukusika okuncinci kuyafuneka
3.Ukuhambelana okuhle kwamacala, uzinzo olungileyo kunye nokuchaneka okuphezulu.
4.Ukuthelekiswa kwamandla: abavelisi be-powder metallurgy balungelelanise i-powder metallurgy mold mold, kunye namandla okuqina kunye nokunyanzeliswa kwezixhobo eziveliswayo zikufutshane nezo zixhobo zokugaya.Umzekelo, iigiya eziqhutywayo zebhokisi yebhokisi yemoto ene-transmission ephezulu Ukucaciswa, umgubo wokunyibilikisa isinyithi uyasebenza kwaye ubanzi.
5.Ukucinezela umgubo usebenzisa ukubumba, kunokuvelisa enye itekhnoloji yokusika engenako ukuvelisa iimilo ezinzima.
6. Ngenxa yokuba ilungele imveliso yobuninzi, ukusebenza ngempumelelo kwemveliso kuphezulu kwaye iindleko ziphantsi kunokusika.
7. Ilungele imveliso ngobuninzi, ke ixabiso liyakhuphisana ngokupheleleyo.
Egqithileyo Icandelo leemoto
Izinto zePowder Metallurgy Izinto
Ipowder yeMetallurgy Pinion
Ukucinezela Powder iintsimbi
Ukuntywila kwiPowder Metallurgy
Stainless Powder yokunyibilikisa isinyithi Auto Izahlulo
Aluminium Powder yokunyibilikisa isinyithi
Indlela yokuthintela umhlwa yentsimbi kunye ...
Iimveliso Powder yokunyibilikisa isinyithi kusetyenziswa i ...
Inkqubo umgubo yokunyibilikisa isinyithi ...
Izinto eziluncedo kunye nokusetyenziswa po ...
Xiaodong Industrial Park, Yuyao City, Ningbo City, kwiPhondo Zhejiang, China
Sitsalele ngoku: 0086-13566055739